Best iOS Njikwa Explorer Iji chọgharịa iOS Media Files
> Resource> iOS> Best iOS Njikwa Explorer maka Windows / Mac
"Ọ bụ na ezi ihe ọ bụla iOS nchọgharị faịlụ ka nwere ike ikwu? M mkpa iji ya jikwaa, nyefe, na-agagharị faịlụ na m iOS ngwaọrụ, iPhone 6S, iPad Obere, na iPod aka. M na-ahụ ụfọdụ ngwa, ma ọ bụghị nnọọ kemfe iji ha ka ha na-eme na ọrụ m mkpa. Echiche ọ bụla? Biko nyere m aka."
Dị ka onye ọrụ n'elu, na-achọ ihe iOS nchọgharị faịlụ na-agagharị na faịlụ gị iOS ngwaọrụ? Ọfọn, m nwere ikwu na Agbalịrị m achọ nke a ụdị ngwa dị ka nke ọma, ma nwetara ihe ọ bụla kasị n'ihi na ndị a obere ngwa ọdịnala na ihe iOS ngwaọrụ adịghị arụ ọrụ nke ọma na mgbe ifriizi. Na-emecha, m na-agbalị Wondershare TunesGo na emewo ya ka ọ dị ka ndabere iOS faịlụ brower ngwa n'ihi na m iPhone na iPad. Ebe a, ga-amasị m ikwu na ọ ka gị.
Download iOS nchọgharị faịlụ ikpe mbipute na-agbalị ya maka free!
Cheta na: Echere m na m kwesịrị ime ka o doo anya na Wondershare TunesGo bụ a desktọọpụ ngwa. Ọ na ihe dị ka iTunes, ma ọ na-eme ihe iTunes apụghị ime.
Ka ndị kasị mma iOS faịlụ Explorer, Wondershare TunesGo awade fọrọ nke nta niile atụmatụ na ị chọrọ maka gị iOS ngwaọrụ. Were a ghọta nke na-esonụ atụmatụ ịhụ ihe ọ pụrụ ime n'ihi na ị.
Chọgharịa iOS faịlụ. Mgbe ejikọta ihe iOS ngwaọrụ gị na kọmputa site na eriri USB na igba egbe Wondershare TunesGo, ị pụrụ ịhụ na TunesGo egosiputa niile mgbasa ozi faịlụ na n'aka ekpe nke window site na udi. Na ị nwere ike mfe agagharị maka faịlụ na gị iOS ngwaọrụ.
Nyefee media faịlụ site na iOS ngwaọrụ kọmputa. Ọ bụrụ na ị ebudatara ụfọdụ na-egbu songs, fim, ma ọ bụ foto gị iOS ngwaọrụ, iji gbochie iTunes ihichapu ha mgbe syncing, ị nwere ike iji nke a iOS nchọgharị faịlụ nyefee ha ka ha na kọmputa. Na Wondershare TunesGo (Windows), ị nwere ike nyefee music, listi ọkpụkpọ, na vidiyo site na iOS ngwaọrụ iTunes Library. Right now TunesGo (Mac) nanị na-akwado na-ebufe music ka iTunes Library. Na-esote version ga-abịa na atụmatụ.
Detuo media faịlụ site na kọmputa na-iOS ngwaọrụ. Ị pụrụ ịhụ iTunes nwere ike iṅomi media faịlụ site na kọmputa na-iOS ngwaọrụ dị ka mma. Otú ọ dị, iTunes mgbe na-ahapụ gị mmekọrịta media faịlụ nke di na iOS kedi formats. Ka ndị kasị mma iOS faịlụ Explorer, TunesGo nwere ike tinye ọ bụla video na song gị iOS. N'oge usoro, ọ ga-tọghata songs na vidiyo na iOS enyi na enyi formats.
Jikwaa songs, videos na photos. I nwekwara ike iji nke a iOS nchọgharị faịlụ jikwaa songs, vidio, na photos. E wezụga na-ebufe ha ka ha na kọmputa maka ndabere, na ị na-enwe ike iji wepụ ha si gị iOS ngwaọrụ dị ka mma. Na ị na-eru nke na-eke listi ọkpụkpọ na foto albums.
Download iOS Njikwa Explorer ikpe mbipute ugbu a!